Qaybta 1. Maxay ka dhigan tahay in ay tirtirto gurmad on iCloud
Ma waxaad ogaatay in aad yeelan karaan gurmad ah iCloud on qalab aad si aad u ma u baahan tahay? Tani waxay gaar ahaan dhacdaa marka aad u cusboonaynta in qalab cusub iyo tan iyo iCloud badbaadiyay hayaan ku salaysan ID qalabka, waxaa laga yaabaa inaad hayaan in ka badan waxaad u baahan tahay ama xitaa kuwa nuqul. Dhibta kale ee la qabo hayaan aad u tiro badan iCloud waa in ay cunaan wax badan oo ka mid ah meel on qalab aad sidaas darteed si weyn u saameyn karaan qaab qalab aad.
Sidaa darteed waa lagama maarmaan in la xilliyo gaar tirtirto qaab iCloud jir ah oo lacag la'aan ah ilaa iyo qaar ka mid ah meel lagu kaydiyo muhiim ah iyo in la hubiyo in qalab aad u qabata ee awoodda aan fiicnayn. Nasiib wanaag, la tirtiro hayaan iCloud jir waa mid aad u fudud sida aan hoos ku arki doontaan.
Qaybta 2. Sidee in ay tirtirto gurmad iCloud ka iPhone / iPad
Raac tallaabooyinkan fudud in ay tirtirto gurmad iCloud ka iPad ama iPhone.
Tallaabada Koowaad: soo bandhigista qalab aad app Settings ka dibna garaac iCloud
Tallaabada Labaad: Tubada on Kaydinta
Tallaabada Saddexaad: Dooro gurmad aad u jeclaan lahaa in ay tirtirto ka dibna garaac delete
Talaabada Afraad: Tubada on "Dami & Delete" ka dibna sug nidaamka si uu u dhameystiro.
Qaybta 3. Sidee in ay tirtirto gurmad iCloud ka computer
Haddii aad halkii ay tirtirto lahayd gurmad iCloud ka your computer, raac tallaabooyinkan fudud loo sameeyo.
Haddii aad tahay user Mac a Dooro Apple bedeley> tixraac Nidaamka> iCloud> Maamul> hayaan. Dooro hayaan aad rabto in aad tirtirto ka dibna riix "Delete." Waxaad u baahan tahay si loo xaqiijiyo Kabcada_.
On Windows; u tag Menu ka Start> dhammaan Barnaamijyada> iCloud Folder. Burcad iCloud ka dibna riix "Maamul"
Daaqadda pop-up ee guji "hayaan" ka dibna dooro hayaan ee aad jeclaan lahayd in aad tirtirto. Riix Delete iyo xaqiijin Kabcada_ ah.
Qaybta 4. Sida loo damiyo gurmad iCloud
Waxa kale oo aad go'aan ka gaari kara in aad rabto in aad dami gurmad iCloud ka mar oo dhan. Raac tallaabooyinkan fudud si dami gurmad iCloud ah.
On aad iPad ama iPhone: tagaan si ay Settings markaas iCloud, ka dibna tubbada loo damiyo
On aad Mac: Tag ee aad rabtid Menu> System Apple ka dibna riix on iCloud. Si aad u dami iCloud kaliya deselect halkan.
On Windows: abuurtaan codsiga iCloud ku Windows markaas deselect iCloud Drive. Hubi in aad badbaadin isbedelada.
Qaybta 5. ma tirtiri karaa gurmad iCloud in la isticmaalo?
Haddii aad isku dayday in ay tirtirto aad gurmad iCloud oo kaliya in ay helaan ee "ma tirtiri kartaa sababta oo gurmad ah waa in la isticmaalo" fariin, ma waxaad tahay mid ka mid ah oo kaliya. Tani waa dhibaato in badan oo ka mid ah dadka isticmaala arrimo la tacaalayeen muddo ah hadda aan xal cad. Maxaa dhacaya waa in aad isku dayeyso in ay tirtirto gurmad ah in dhawaan ay abuureen qalab kale ama waxaa loo soo celiyay by qalab kale macruufka. Tani waa sababta ugu wayn ee aysan suurto gal ahayn in ay tirtirto gurmad ah.
Sida aan horayba u soo sheegnay, ma jiro xal cad oo caawin doona in aad u xaliyo dhibaatadan. Haddii aad isku daydo in ay tirtirto gurmad iCloud ah oo fariin this, sug 48 saac oo isku day mar kale. Sugitaanka u muuqataa in ay ka shaqeeyaan inta badan dadka inta badan, sababtoo ah gurmad aad tirka lagu ma soo celinta doonaa qalab kale macruufka.
Qaybta 6. Mid ka mid ah click oo bilaash ah ilaa kaydinta badan oo ku saabsan aad iPhone / iPad
In la tirtiro hayaan iCloud idiin cadeeyo kartaa qaar ka mid ah meel lagu kaydiyo qalabka iyo hagaajin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, ma aha hayaan kaliya hore iCloud in hoos u dhigi karaa qaab qalab aad. Waxaa jira ciidan ee files kale junk qalabka aad u baahan tahay inaad kala cadeeyo haddii aad doonaysid in aad ka heli kaydinta dheeraad ah.
Wondershare Eraser Safe waa qalab kaa caawinaya in aad nadiifiso files junk kuwaas oo kaliya 1-click. Waa mid aad u functional, codsiga aad u waxtar leh in aad ka heli doonto faa'iido leh in siyaabo badan ay ka mid yihiin;
Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u ilaaliyaan macluumaadka gaarka kuu ah oo ay tirtiro dhammaan macluumaadka xasaasiga ah ka hor inta aad iibiso ama dib u qalabka
Waxaad u isticmaali kartaa si joogto ah oo dhan ka saaraan files tirtiray oo loo hubiyo in ay yihiin unrecoverable
Waxa kale oo aad isticmaali karto si joogto ah masixi qalab aad
Waxaad sidoo kale dedejin kartaa qalab aad by tirtiro dhammaan faylasha junk
Raac tallaabooyinkan fudud si lacag la'aan ah ilaa iyo kaydinta ee 1-riix isticmaalaya Wondershare Safe Eraser
Tallaabada Koowaad: Ka dib markii carar Safe Eraser on your computer, waxaa lagu daahfuri ka dibna lagu xiro qalabka aad isticmaalaya fiilooyinka USB.
Tallaabada Labaad: Dooro "Mid ka mid ah Nadiifinta Click" on this suuqa kala weyn.
Codsiga waxaa isla markiiba bilaabi doonaan inay iskaan qalab aad.
Tallaabada Saddexaad: Codsiga qor doonaa dhammaan junk faylasha heli karo. Just guji "Nadiifinta" oo bilaash ah ilaa qalab aad.
Ku hay qalabka ku xiran inta ay socoto oo dhan si loo hubiyo ku-oolnimada. Marka tan la dhammeeyo, codsiga muujin doonaa xaaladda kaydinta qalabka ee sida ku cad suuqa kala socda.
> Resource > iCloud > Ma u baahan tahay in ay tirtirto kaabta iCloud